६ महिनाभित्र सरकारमा फर्किन्छौंः पवन चामलिङसँग अन्तर्वार्ता - Chautari Post Online
६ महिनाभित्र सरकारमा फर्किन्छौंः पवन चामलिङसँग अन्तर्वार्ता
July 3, 2019 by Chautari Post Online
पवन चामलिङ (तस्वीरः नर्थइस्ट नाउ डटइन)
‘अब २५ वर्ष लामोकाल मुख्यमन्त्री रहेको अनुभवको अटोबायोग्राफी लेख्नु छ। धेरै संस्मरण र भ्रमण अनुभव लेख्नु छ। अनि थुप्रै कविता र गीत लेख्नु छ। लेखेका धेरै लेखहरूलाई साफी पनि गर्नु छ।’
भारतको नेपाली भाषी राज्य सिक्किमको सरकारबाट बाहिरिएको एक महिनापछि नै पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले ६ महिनापछि फेरि गान्तोकको सत्तामा फर्किने दाबी गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री भएर २५ वर्षसम्म निरन्तर सिक्किममा शासन गरेका चामलिङ विधानसभा चुनावमा दुई सिटको फरकले पराजित भएपछि सरकारबाट बाहिरिएका थिए। चामलिङलाई विस्थापित गरि पीएस गोलेको नेतृत्वमा एसकेएम पार्टीले सरकार गठन गरेको थियो।
चामलिङले गान्तोकमा आइतबार नेपालखबरसँग विशेष कुराकानी गर्दै एक महिनामै गोले नेतृत्वको सरकारले आफ्नो रुप देखाएकाले सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा (एसडीएफ) पुनः सरकारमा फर्किने दाबी गरेका हुन्।
अबका ६ महिनाभित्र सिक्किमका तीनवटा सिटमा उपचुनाव हुँदैछ। दक्षिण सिक्किमको पोकलोक–कामराङ र पूर्व सिक्किमका गान्तोक तथा मार्ताम–रुम्तेक क्षेत्रका उपचुनाव जित्ने लक्ष्य राखेर चामलिङले त्यसपछि सरकारमा फर्किने नयाँ रणनीति तय गरेका हुन्।
उपचुनावमा तीनै सिट जितेको खण्डमा सिक्किम विधानसभामा सत्तारूढ दल एसकेएम र प्रमुख विपक्षी एसडीएफको सिट सङ्ख्या १६–१६ हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा मध्यावधी चुनाव नभएसम्म राज्यपालले सरकार सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ।
मध्यावधि चुनाव भएको खण्डमा एसडीएफ फेरि सरकारमा फर्किनेमा पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङ विश्वस्त देखिन्छन्।
‘सिक्किममा एसडीएफको विकल्प छैन, ६ महिनाभित्रै सरकारमा फर्किने मेरो दाबीको वैज्ञानिक आधार छ’, चामलिङले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीलाई जनताले रिजेक्ट गरेका छैनन्।’
आफ्नो पार्टीले दुई सिट कम्ति पाएपनि मत प्रतिशत एसकेएमको भन्दा धेरै रहेको चामलिङले बताए।
‘वर्तमान सरकारको कार्य देखेर अहिले सिक्किमे जनता पछुतो गरिरहेका छन्’, चामलिङले भने।
गान्तोकको सरकारबाट बाहिरिएपछि चामलिङ निजी निवास र पार्टी मुख्यालयमा प्रतिदिन गाउँ गाउँका कार्यकर्ताहरू भेटिरहेका छन्। मिन्तोकगाङ छोड़्दा जनताको आँखाबाट निस्केको आँसु र नाम्ची घुर्पिसेबाट गान्तोक फर्किँदा पाएको स्वागतले आफ्नो विश्वासमा थप बल मिलेको चामलिङले बताए।
भ्रष्टाचारमा मुछिएका पीएस गोलेलाई मुख्यमन्त्री बनाइएपछि त्यसविरुद्ध चामलिङको पार्टी एसडीएफले सर्वोच्च न्यायालयमा कानुनी लडाइँ पनि लडिरहेको छ। भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएर एक वर्षको जेल सजाय भोगिसकेका एसकेएम पार्टीका अध्यक्ष पीएस गोलेलाई मुख्य मन्त्री बनाउनु असंवैधानिक हुने एसडीएफले तर्क गर्दै आएको छ।
भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि चुनावसमेत लड्न नपाएका गोलेलाई राज्यको मुख्यमन्त्री पदमा शपथ ग्रहण गराइएको विषय नै असंवैधानिक ठान्छन्, पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ। यसैको विरोधस्वरुप एसडीएफले विधानसभाको बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
‘जबसम्म पीएस गोले मुख्यमन्त्री पदमा रहन्छन् तबसम्म एसडीएफले विधानसभाको सत्र बहिष्कार गर्नेछ’, चामलिङले भने।
पछिल्लोपटक १५ दिनको दिल्ली भ्रमणपछि सिक्किम फर्केका पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङ राज्यको सरकारमा फर्किआउने कुरामा अझै विश्वस्त छन्। दिल्लीमा १५ दिनभित्र उनले के के गरे भन्ने कुरा गोप्य राखिएको छ।
दिल्लीबाट सिक्किम फर्केपछि चामलिङले स्पेशल प्रोटेक्सन ग्रुप (एसपीजी) सुरक्षा पाएका छन् भने केन्द्रको अमरनाथ यात्रा कल्याण समितिको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति पनि पाएका छन्। यसबाट के देखिन्छ भने भारतको सत्तारुढ पार्टी भाजपासँग चामलिङको सम्बन्ध राम्रो छ।
पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङसँग नेपालखबरले गरेको थप कुराकानीः
नेपालखबरः सरकारमा हुनु र विपक्षमा पर्नुको फरकलाई तपाईंले कसरी लिइरहनु भएको छ?
पवन चामलिङः अहिले म भारमुक्त भएको छु। स्वतन्त्र भएको छु। अहिले मैले जति पनि जनतालाई भेटिरहेको छु। सबै भावनात्मक सम्बन्ध भएकाहरूलाई भेटिरहेको छु। मलाई भेट्न आउनेहरू सबै भावनात्मक र सैद्धान्तिक सम्बन्ध भएकाहरू छन्। मेरो उनीहरूसँग एउटा साँचो सम्बन्ध स्थापित भइरहेको छ। र, भारमुक्त भइरहेको मोटामोटी अनुभव भइरहेको छ। स्वतन्त्र भएको अनुभव भइरहेको छ।
तपाईंले भारमुक्त र स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु हुँदैछ, तर तपाईंलाई भेट्न आउनेहरू त केही आशा र सपना लिएरै आइरहेका छन्। यसले त अझ आफूमाथि उनीहरूको आशा र सपनालाई पूर्ण गर्ने दायित्व थपिएको अनुभूति तपाईंलाई भइरहेको छैन?
म राजनीतिमा जबसम्म हुनेछु तबसम्म जनताको दायित्व ममाथि रहनेछ। म सिद्धान्तको आधारमा राजनीति गर्छु। मेरो राजनीति सत्तासम्म मात्र होइन, त्योभन्दा पर छ। मेरो राजनीति जनताको इच्छा, आकांक्षा र सपनासम्म छ। जनताको अधिकारसम्म छ। मान्छे हुनुको सत्यसँग छ। त्यसैले म समग्रतालाई अँगालेर राजनीति गर्छु। सत्तासम्म मात्र मेरो राजनीति नजोडिएकाले अहिले पनि म मेरो राजनीतिको यात्रामा निरन्तर छु।
क्षेत्रीय राजनीति (विशेष गरी सिक्किम, दार्जीलिङतिर) मा कुनै एक पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि पुनः फर्किआएको इतिहास छँदैछैन भन्दा हुन्छ। तर, तपाईंले घरी घरी सत्तामा फर्किआउने दाबी गरिरहनु भएको छ। यो दाबीको सैद्धान्तिक आधार के होला?
सरकारमा फर्केर आउने मेरो जुन दाबी छ, यो दाबी वैज्ञानिक छ। किनभने एसडीएफ पार्टीको विकल्प सिक्किममा अहिले छैन। अहिले राज्यको सरकारमा जुन पार्टीको सरकार आएको छ, त्यो हत्या हिंसा, घृणा र झूटमार्फत् आएको हो। यस्तो झूट, घृणा र आवेशमा राज्यको सरकार परिवर्तन भएको छ, त्यो रचनात्मक परिवर्तन होइन। यो दीर्घम्यादी परिवर्तन होइन। यो क्षणिक परिवर्तन मात्र हो। एसडीएफ पार्टीले २५ वर्षदेखि राज्यमा जुन रचनात्मक परिवर्तनको प्रक्रियालाई अघि बढ़ाइरहेका थियौं, अहिले नयाँ सरकार आएपछि त्यो केही समयका लागि स्थगित भएको छ।
तर सिक्किम परिवर्तनको हाम्रो जुन क्रान्ति छ, त्यो निरन्तर जारी रहनेछ। हामीले सिक्किमलाई अहिलेसम्ममा भारतकै सबैभन्दा उत्कृष्ट राज्य बनायौं। हाम्रो उद्देश्य सिक्किमलाई भारतको मात्र होइन, विश्वकै सबैभन्दा राम्रो राज्य बनाउनु हो। त्यो लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म परिवर्तनको यो प्रक्रिया रोकिनेवाला छैन। त्यसैले पनि एसडीएफ पार्टीको विकल्प अहिले आएको छैन। एसडीएफ पार्टीको विकल्प तयार नभएसम्म एसडीएफ पार्टी फेरि सरकारमा आउनु मेरा लागि जरुरी होइन, तर सिक्किमे जनताका लागि जरुरी छ। सिक्किमे जनताले त्यो कुरा महशुस गरिरहेका छन्। यसैले अहिले परिवर्तन भएको क्षणिक अवस्थामा उनीहरूले पछुतो गर्दैछन्। हामीले गलत गरेछौं। हाम्रो लागि सही सरकार, सही नेतृत्व र सही नीति भएको पार्टीलाई छोडेर आवेशमा गलत फैसला लिएछौं। हामीलाई फेरि एसडीएफ सरकार चाहियो। फेरि हामी सिक्किममा एसडीएफ सरकारलाई फर्काएर ल्याउँछौं भन्ने जनताले मन बनाइसकेका छन्।
त्यसो भए चुनावमा तपाईंहरू एसडीएफभित्रकै अन्तर्कलहले पराजित भएको हो?
यसपाली एसडीएफकै कारण एसडीएफ पराजित भएको छ। एसडीएफको पराजय एसकेएमको लोकप्रियता होइन। हाम्रा कमीकमजोरीको कारण, हाम्रा महत्त्वाकांक्षाहरूको टकराव भएर हामी यसपालि हारेका हौं। हाम्रो पार्टीकै कतिवटा कमी कमजोरीहरू, हाम्रै कार्यकर्ताहरूको निष्क्रियता र व्यक्ति स्वार्थको द्वन्द्व भएर हाम्रो पराजय भएको हो। त्यसलाई हामीले स्वीकारेका पनि छौं। यति लामो समयसम्म सरकारमा बसेकोले गर्दा हुनसक्छ, सिक्किमेली जनताको कहींकतै मन दुखायौं होला, हाम्रो कमी कमजोरी भयो होला। अनजानमा गल्तीहरू भए होलान्। त्यसकारण हामीसँग जनताले मन दुखाए होलान्। उनीहरूले हामीलाई यसपाली सत्तादेखि बाहिर राखेका छन्। जनताले हामीलाई शिक्षा दिएका हुन्। जनताले हामीलाई खारेज गरेका छैनन्। खालि हामीलाई केही क्षणका लागि बाहिर राखेका छन्। सायद उनीहरूले हामीलाई ‘रिलाइज’ गर्ने मौका दिएका होलान्। हामी बढ़ो विनम्रपूर्वक उनीहरूको फैसलालाई स्वीकार गर्नेछौं। जनताको जुन फैसला छ, त्यसलाई शिरोधार्य गरेर उनीहरूले हामीलाई जहाँ राखेका छन्, त्यहाँ बसेर इमानदारपूर्वक काम गर्नेछौं। हामी जनताको फैसलाअघि नतमस्तक छौं। हामी जनताअघि आफ्नो भूल स्वीकार गर्नेछौं।
वर्तमान एसकेएम सरकारविरुद्ध तपाईंहरूको प्राइम टार्गेट के हो?
वर्तमान सरकारविरुद्ध हाम्रो त्यस्तो प्राइम टार्गेट केही छैन। यो सरकारले जे जति काम गर्नेछ, त्यो आफ्नो सिद्धान्त र नीति अनुसार गर्नेछ। उनीहरू जस्ता छन्, त्यस्तै काम गर्नेछन्। त्यसकारण हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ सिक्किम र सिक्किमे जनताको पक्षमा, सुरक्षामा काम गर्नु हो। सिक्किमको भविष्यका लागि काम गर्नु हो। यी लक्ष्यआधारित कार्यलाई अहिले हामी विपक्षी पार्टी भएरै पनि निरन्तरता दिनेछौं। किनभने मैले अघिबाटै भने हाम्रो राजीति केवल सरकारसँग मात्र छैन, तर सिक्किम र सिक्किमे जनताको भाग्य र भविष्यसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण हाम्रा कार्यक्रम र लक्ष्य सत्तादेखि बाहिर हुँदैमा रोकिनेवाला छैन। म निरन्तर जनताका साथमा हुनेछु। जनताले यसपाली हामीलाई विपक्षी पार्टीमा राखेका छन्। त्यसैले विपक्षी पार्टीमा बसेर काम गर्नेछौं। यदि भविष्यमा जनताले हामीलाई
विपक्षी पार्टीमा राखेनन् भने पनि जनतासम्म गएर जनताको साथमा रहेछौं। किनभने हामी जनताका लागि राजनीति गर्छौं। सिक्किमका लागि राजनीति गर्नेछौं।
तपाईंले धेरैपटक एसडीएफले बलियो र रचनात्मक विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ। तर, यसको विपरीत विधानसभाको कारबाही भने बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। यस्तो विरोधाभाष किन?
हामीले विधानसभाको कारबाही बहिष्कार गर्नुलाई विरोधाभाष भन्न मिल्दैन। विधानसभा बहिष्कार गर्ने हाम्रो फैसला रचनात्मक, सैद्धान्तिक हो। जुन मुख्यमन्त्री विधायक हुने अधिकारबाट वञ्चित छ, त्यस्ता व्यक्ति पञ्चायतको पदमा एकक्षण बस्ने अधिकार पनि छैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई असंवैधानिक प्रकारले मुख्यमन्त्रीको पदमा आसिन गराइयो। पञ्चायत र विधायकसमेत हुन नपाउने व्यक्ति मुख्यमन्त्री रहेको सदनमा एकक्षण पनि बस्ने हाम्रो नैतिक अधिकार छैन। त्यसैले यो हाम्रो सैद्धान्तिक अडान हो। जबसम्म वर्तमान मुख्यमन्त्री सदनका नेता हुनेछन्, मुख्यमन्त्री रहनेछन्। त्यो दिनसम्म हामी विधानसभामा जानु हाम्रो सिद्धान्तदेखि बाहिरको कुरा हो। किनभने हामी प्रजातन्त्रको रक्षक हौं, भक्षक होइनौं। असंवैधानिक प्रकारले मुख्यमन्त्री पदमा त्यस्ता व्यक्तिलाई आसिन गराएर संविधान र कानूनको धज्जी उडाउने कार्य भएको छ। यसकारण त्यस्तो सदनमा हामी गएर पापको भागिदार बन्न चाहँदैनौं। यसैले हामीले सदन बहिष्कारको फैसला गरेका हौं। जुन दिन उनी (पीएस गोले) मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिर जानेछन्, त्यसपछि तुरुन्तै हामी विधानसभा गएर रचनात्मक र सबल विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नेछौं। र, जनताको पक्षमा वकालती गर्नेछौं। विपक्षी कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको प्रमाण देश र दुनियाँलाई हामी दिनेछौं।
के त्यसो भए तपाईंहरूको विरोध पीएस गोलेको मुख्यमन्त्रीत्वलाई लिएर नै हो?
हाम्रो विरोध पीएस गोलेको मुख्यमन्त्रीत्वलाई लिएर होइन। तर असंवैधानिक प्रकारले वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई आसिन गराएको छ, त्यो कानून र संविधानको पनि विरोध हो। त्यसैले हामी संविधान र कानूनको रक्षक भएकोले सदनमा नजाने निर्णय लिएका हौं।
मतगणनाको अघिल्लो दिनसम्म तपाईंले एसडीएफ पार्टीले छैठौंपटक सरकार बनाउने दाबी गरिरहनु भएको थियो। तर, परिणाम यसपटक उल्टियो। यसो हुनुको सबैभन्दा ठूलो चुक तपाईंलाई के हो जस्तो लाग्छ?
सबैभन्दा ठूलो चुक र गल्ती भनेकै मैले साथीहरूलाई बेसी विश्वास गरें। मैले बेसी विश्वास गर्नु, अरूमाथि धेरै भरोसा गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुक र गल्ती भयो।
२५ वर्षे एसडीएफ सरकारको सर्वप्रमुख उपलब्धि केलाई ठान्नुहुन्छ?
एसडीएफले सिक्किम र सिक्किमेली जनताको मान सम्मान बढाएको छ, यो नै सर्वप्रमुख उपलब्धि हो। सिक्किमेली जनतालाई हामीले स्वतन्त्रता दिएका छौं। सिक्किमेली जनताको जीवनमा खुशियाली ल्याएका छौं। यो एउटा उपलब्धि हो। अर्को उपलब्धि हामीले भौतिक रूपमा सिक्किमलाई विश्वकै सबैभन्दा छिटो विकास भएको राज्य बनाएका छौं। विश्वमा सबैभन्दा छिटो गरिबी घटेको राज्य सिक्किमलाई बनाएका छौं। सिक्किमलाई देश र दुनियाँमा चिनाएका छौं।
२५ वर्षको शासनकालमा सुल्झाउन नसकिएका मुद्दाहरू के के होलान्, जसको पछुतो तपाईंलाई छ?
राज्य सरकारको अधिकारभित्रका जति कामहरू थिए, ती सबै गरिसकेको छु। बरू त्योभन्दा बेसी गरेँ, कम्ती गरिनँ। त्यसैले मलाई कुनै पछुतो छैन। तर केन्द्र सरकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू जुन हामीले मागिरहेका थियौं, ती पूरा गर्न नसकेको मुद्दा चाहिँ सिक्किमका सबै नेपालीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउनु नसक्नु हो। यसमा मलाई सबैभन्दा बेस्वाद लागेको छ। यसो गर्न सकिएन। किनभने म न्याय र समानताको राजनीति गर्ने व्यक्ति हुँ। म सिक्किमका सबै नेपालीलाई जनजाति बनाउन चाहन्छु। सिक्किमका नेपालीहरू राजाको शासनकालमा जनजाति थिए। तर भारतमा विलय भएपछि सिक्किमका नेपाली जनजाति बन्नबाट छुट्यौं। राजाको शासनमा रहेको जनजातिको मान्यतालाई फर्काउनु थियो, तर यो पूरा गर्न नसकेकोमा मभित्र एउटा दुःख छ। अर्को दुःख, सिक्किमलाई भारतको सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाउन हामी सफल भयौं, तर विश्वकै सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्यमा मैले कार्य गरिरहेको थिएँ, त्यो पूरा गर्न नसकेकोमा दुःख लागेको छ।
अहिले तपाईं सरकारमा हुनुहुन्न। राज्यको सरकार सञ्चालनको भारबाट मुक्त हुनुभएको छ। यो समयलाई कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ?
अहिले नै मैले पाइरहेको समयलाई रचनात्मक कार्यका लागि सदुपयोग गर्न सकिरहेको छुइनँ। किनभने भर्खरै सत्ताबाट बाहिर गएको हुँ। घरहरू सर्नु पर्ने, उतायता सामग्रीहरू लथालिङ्गै। त्यस्तै हो। अहिले नै केही गर्न सकिरहेको छुइनँ। तर, केही राम्रो कार्य गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु। मैले समय पाएकोमा बडो खुशी लागिरहेको छ। निश्चय पनि रचनात्मक काम गर्नेछु। मेरो आफ्नो अटोबायोग्राफी लेख्नु छ। २५ वर्ष लामो मुख्यमन्त्री गरेकोले धेरै अनुभव छ। धेरै संस्मरण छन्। कति धेरै भ्रमण गरेको छु। तीहरूमाथि लेख्नु छ। २५ वर्षको लामो घटनाक्रम छ। त्यसलाई पनि लेख्नु छ। अनि थुप्रै कविता र गीत लेख्नु छ। लेखेका धेरै लेखहरूलाई साफी पनि गर्नु छ।नेपाल खबर अनलाइनबाट साभार गरिएको ।
Posted in अन्तर सम्वाद, मूल खबर
Prevसङ्खुवासभामा प्रहरी दमनविरुद्ध पूर्वि कमाण्डद्वारा घोर भत्र्सना (विज्ञप्तिसहित)
Nextकाँकरभिट्टा नाकाबाट भित्रिने हरियो तरकारीमा कमि